ဖူးနုသစ်: စူ့ထက်စူ လူစွမ်းကောင်းတွေ
poly ဆိုတာ YIT ခတ်က GTI အဆင့်ပဲရှိတာပါ။ Singaporeans ဆိုလဲ Junior Colleges အမှတ်မမှီတဲ့သူတွေ တက်တာလေ။ စက်မှုတက္ကသိုလ်က တဝက်တပျက်နဲ့ ထွက်လာတဲ့သူတွေဆိုတော့ စာကလွယ်မှာပေါ့။ နောက်ပိုင်း မြန်မာတွေ ဆိုးတာ စာမေးပွဲကျတာ များလို့ semester တခု တရာလောက်ခေါ်တာ လျှော့ပြီး ဆယ်လေး ငါးရောက်လောက်ပဲ့ ခေါ်တော့တယ်။
ယောကျာ်းလေးတွေမို့ ထင်ပါတယ် ZT ရယ်။ မိန်းကလေးတွေကတော့ ပုံမှန် စာကျက်ကြတယ် မဟုတ်လား။ အမတို့ ခေတ်နဲ့တော့ တကယ် မတူတဲ့ လူစွမ်းကောင်းတွေပါပဲ။ တော်ကြပါပေတယ်။
7 Aug 09, 06:14
kom: မြတ်နိုးလေ သံက ဆွဲခိုငး် ချင်တဲ့လေသံဘဲ။
7 Aug 09, 06:12
kom: ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရတာလဲ။ ဆက်မတွေးဘဲရ့ပ်လို်က်ရင်ကောင်းပါလိမ့်မယ်။
kom: ရင်ထဲမှာ မကောငး်ဖြစ်လိုက်တာ။
7 Aug 09, 06:11
kom: တော်မှာပေါ့ top ten တွေလာတာ ကိုး။ no wonder.
kom: စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ဆရာဝန်အချို့ဆရာဝန် ဘွဲ့ရပြီးကာမှ ကျောင်းတစ်ချို့ပြန်တက်တာ ကြားတော့ကြားလို့မယုံးနိုင်အောင်ဖြစ်မိတယ်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်မြန်မာ ကျောငး်သားတွေ တော်တာကိုတော့ ဂုဏ်ယူမဆုံးပါဘူး။ တော်မှ
7 Aug 09, 06:10
kom: ဒါ brain drain ပါ။ စက်မှူတက္ကသိုလ် အဆင့်ရှိတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်က polyအဆင့်ကို တော်တာ အံသြစရာမရှိပါဘူး။ တက္ကသိုည်ကကျောင်းသားက ဆယ်တန်းဝင်ဖြေသလိုဘဲခံဏားရပါတယ်။ brain darin ဆိုပြီး တိုင်းပြည်အတွက် စိတ််မကေ
7 Aug 09, 05:52
မြတ်နိုး: အခုရော ပရိုဂရမ် ကို စိတ်ဝင်စားသေးလားဟင်
ဝမ်းသာဂုဏ်ယူရမှာလား၊ ဝမ်းနဲရမှာလား ကိုဇက်တီရယ်.....
စိတ်တော့မကောင်းဘူး။ တချို ့ကိုနှမြောလို့။
ဝမ်းမသာပါဘူး YIT ခေတ် က Top Ten လူတွေ Poly မှာတော်တာဘာမှဆန်းဘူး NTU, NUS မှာတောင် အရမ်းတော်တဲ.လူတွေရှိတယ် ..အရင် ခေတ်ကပြောပါတယ် အခုတော.သိပ်မဝင်ကြတော.ဘူးတဲ. ။ YIT ့က ရိုးရိုး ပြီးလာလို. NTU, NUS မှာ Master ဆက်တက်တဲ. လူတွေကျတော.လည်း Major ဘာသာရပ်ပေါ်မှုတည်ပြီး ယူတဲ. Subjects အနည်းအများ ပေါ်မှူတည်ပြီး ပြာတဲ.လူ အေးဆေးတဲ.လူကွဲပါသေးတယ် ပုံသေ ပြောမရပါဘူး (သတင်းအချက်အလက် များကို NTU မှPrecision Engineering Master ကိုကို. ထံမှရယူပါသည် ) ကိုယ်တိုင် Master ဘွဲ.ရတာ မဟုတ်ပါ အထင်ကြီးကုန်မှာစိုးလို. ဟိဟိ .....
ဒါလေးပဲ ကိုယ့်မြန်မာတွေ အတွက် ဂုဏ်ယူနေရတယ်..လက်မထပ်ခင် အရင်ရုံးက လူတွေက ပြောကြတယ်..စကာင်္ပူရီးရန်းကို ယူတဲ့...မယူဘူး ငါတို့မြန်မာတွေ ဒီမှာ ပိုလီ တို့ntu တို ့လာတက်နေတဲ့ လူ အများကြီးလို ့..အနဲဆုံးတော့ အင်ဂျင်နီယာ ရတယ်လို့..
ကိုယ်တက်တာ လဲ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဟိဟိ
အင်ဂျင်နီယာ များစိတ်မဆိုး ကြပါနဲ့
စီနီယာ့ စီနီယာ ဆရာကြီးတွေကိုး =)
ဘာမှ မပြောရဲလို့ တိတ်တိတ်လေး ပြန်သွားပါတယ်..
ZT.. thanks for the post :D
ဟင်းးးးး စူ့ထက်စူ တွေထဲမှာ တို့တွေ မပါတာတော့ သေချာတယ်
ခုပို့စ်လေးကိုဖတ်ပြီး စူ့ထက်စူ လူစွမ်းကောင်းတွေကို လေးစားအထင်ကြီး အားကျသွားပါတယ် ကိုဇက်တီ။
လို့ရမလားဟင်။ အနော်ခု ပရိုဂရမ်းမင်းသင်ရတော့မှာမို့ နားမလည်ရင်ရှင်းပြပေးမယ့်သူလိုနေလို့ အကူအညီလိုရင်တောင်းချင်တယ်။။။ဖြစ်နိုင်မှပါ။ :D
တော်တော်ကြိုက်ပါတယ် (post ကိုပြောတာပါ)
အဲလိုမျိုး အားနေ ဘောလုံးကန်လိုက်၊ ဘောလုံးပွဲကြည့်လိုက်၊ ဖဲထိုင်ရိုက်လိုက် အနားနီးမှ သူများစာအုပ်နဲ့ ကပ်ကြည့်ပြီး အချိန်တန်တော့ roll 1 ပဲ ဆိုတဲ့ လူမျိုးတွေကို အင်မတန်ကို လေးစားပါတယ်။
programming တော်တဲ့လူမျိုးကိုလဲ လေးစားပါတယ်။ (စာကျက်စရာမလိုတဲ့ ဘာသာတွေမှာတော်တဲ့လူတွေကို လေးစားပါတယ်)
လေးစားတာတွေ တော်တော် များသွားပြီ။
AutoCAD ဆရာကြီး business ပိုင်းလိုက်သွားတာလဲ လေးစားတာပါပဲ။ (အကြံတူနေလို့ပါ)
အဲလို နေချင်သလိုနေ လုပ်ချင်တာလုပ်ပြီး အချိန်တန်တော့ result မှာ အကောင်းဆုံး ဆိုတဲ့ လူမျိုးတွေကို သဘောကျနေတတ်လို့ "သူလိုလူ" က ဦးချစ်မောင်ကို လုံးးးးးး၀၀၀ ခံစားလို့ မရခဲ့တာ ဖြစ်မယ်။
ခုမှ conclusion ဆွဲမိတာ။
(ဒါပေမဲ့ ဦးချစ်မောင်လဲ လုပ်ချင်ရာလုပ်တဲ့ လူမျိုးပါပဲလေ)